aussie poems – zlkontempo
Tag: aussie poems
၂၀၀၉ ခုနှစ် အော့ဇီကဗျာ (၅ )ပုဒ်
Posted on October 30, 2012 | by zlkontempo | LeaveaComment on ၂၀၀၉ ခုနှစ် အော့ဇီကဗျာ (၅ )ပုဒ်
၂၀၀၉ ခုနှစ်ထဲမှာ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဩစတြေးလျကဗျာဆရာ/ဆရာမ ၅ ဦးရဲ့ ကဗျာ ၅ ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ဖေါ်ပြလိုက် ပါတယ်။ တူညီကြတဲ့ နှစ်ကာလထဲမှာပဲ ကဗျာအကြောင်းအရာ ရွေးချယ်ပုံ ၊ ရေးနည်းပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ ကဗျာပစ္စည်းများသုံးစွဲပုံတို့ကို ယှဉ်ကြည့်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဝေးကကြည့်ရင် မှက်တွေနဲ့ တူတဲ့ အကောင်တွေရှိတယ် ၊ ပြီး
ကြယ်တွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဟောင်ပြီးစည်းရုံးတဲ့ အကောင်တွေ
သူတို့ရဲ့ သားကောင်ကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းတဲ့ အကောင်တွေ
အငြင်းအခုံတစ်ခုမှာ ဘက် ၂ ဘက်စလုံးဝင်ပါတဲ့ အကောင်တွေ
ရှားပါးပြီး တန်ဘိုးကြီးတဲ့ ကြွေအိုးတစ်လုံးကို ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့ အကောင်တွေ
အမျှင်တစ်မျှင်တည်းပါတဲ့ စုတ်တံတစ်ချောင်းနဲ့ ရေးဆွဲလို့ရတဲ့ အကောင်တွေ
မိမိတို့ရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်တွေက ဖယောင်းတိုင်တွေကို
သူတို့ရဲ့ လျှာတွေနဲ့ မီးလှမ်းညှိတဲ့ အကောင်တွေ
ကုတင်ပေါ်က ကြမ်းပိုးတွေ ၊ အသည်းထဲက ကပ်ပါးလို အကောင်တွေ
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ငြင်းပယ်ထားတာကို ဆန့်ကျင်ကြတဲ့ အကောင်တွေ
ခေတ္တငြိမ်သက်ပြီးမှ ထပြေးကြတဲ့ အကောင်တွေ
ဖြစ်တည်မှု ကိုယ်တိုင်ဟာ ဖြည်လို့မရတဲ့ ကြိုးထုံးလို အကောင်တွေ
ပျင်းရိငြီးငွေ့နေဖို့ပဲ တတ်တဲ့ အကောင်တွေ
ဖါးတွေ ၊ ပက်ကျိတွေလို ဥာဏ်အလင်းရကြတဲ့ အကောင်တွေ
လူတွေမတ်တတ်ရပ်သလို မရပ်ကြတဲ့ အကောင်တွေ
အလံပေါ်မှာ သင်္ကေတအဖြစ်ထားရှိသင့်တဲ့ အကောင်တွေ
ခြင်တွေ ၊ မိကျောင်းတွေလို
ဂျိုပါတဲ့မြင်း ၊ ရေသူမ စတဲ့ တကယ်ရှိသင့်တဲ့ အကောင်တွေ
လူတွေကို ပြုံးစေတဲ့ အကောင်တွေ – ဥပမာ Ladybird ချေးပိုးထိုး
လူတွေကို ရာဂစိတ်နိုးကြွစေတဲ့ အကောင်တွေ
ကျိုးပဲ့ပျက်စီးလွယ်ပေမယ့် ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ့် အကောင်တွေ
ပြီး . . . မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ အကောင်တွေ
ဖီးနစ်က်စ်ငှက် ၊ လူတစ်ပိုင်းမြင်းတစ်ပိုင်း ဆဲန် တောရ် ။ ။
(Robert Gray ရဲ့ Classifying the Animals)
Posted in Poetry | Tagged aussie poems, Poetry, translation
ဟင့်အင်း under Poetry
ကပ်ရောဂါ under Poetry
တုတ်ကြီးနဲ့ ဖွေးအယ်လေးတို့ရဲ့ စတီရီယိုတိုက်ပ် under Poetry
မွေးနေ့လက်ဆောင် under Poetry
Archives Select Month April 2020 (3) March 2020 (5) February 2020 (4) January 2020 (4) December 2019 (3) November 2019 (5) October 2019 (3) September 2019 (8) August 2019 (7) July 2019 (1) June 2019 (3) May 2019 (4) April 2019 (6) January 2019 (1) August 2018 (4) July 2018 (13) June 2018 (4) May 2018 (13) April 2018 (10) March 2018 (3) February 2018 (11) January 2018 (7) December 2017 (13) November 2017 (15) October 2017 (8) September 2017 (1) August 2017 (2) July 2017 (5) June 2017 (1) May 2017 (1) April 2017 (6) March 2017 (17) February 2017 (16) January 2017 (11) November 2016 (1) September 2016 (1) August 2016 (1) May 2016 (1) March 2016 (2) February 2016 (1) September 2015 (1) July 2015 (1) February 2015 (1) November 2014 (1) October 2014 (2) September 2014 (7) April 2014 (1) March 2014 (1) January 2014 (3) December 2013 (6) November 2013 (1) September 2013 (1) August 2013 (1) July 2013 (12) June 2013 (2) May 2013 (2) April 2013 (1) March 2013 (1) February 2013 (2) January 2013 (5) December 2012 (3) October 2012 (10) September 2012 (9) August 2012 (9) July 2012 (3) June 2012 (1) May 2012 (2) April 2012 (4) March 2012 (4) February 2012 (11) January 2012 (3) December 2011 (4) November 2011 (1) September 2011 (1) February 2011 (1) September 2010 (1) December 2009 (1) November 2009 (1) July 2009 (1) June 2009 (3) May 2009 (2) January 2009 (1) January 2008 (2) October 2007 (1)
Categories Select Category Articles (40) Info (16) Interview (1) News (12) Notes (64) Poetry (317) Prose (5) Reading (5) Reviews (5) UMP (1) Visual/ Concrete (1)
alvin pang american poetry Amy Gertsler Articles Bei Dao bones will crow charles bernstein Conchitina Cruz concrete contemporary poetics Documentary Poetry English Eugene Dubnov Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki hsia yu Info Interview IPNHK James Galvin jameson fitzpatrick jericho brown karl popper Katie Degentesh Marek Wojdylo Maung Chaw Nwe News Notes of clocks and clouds Parnassus poetics Poetry poetry-parnassus Poetry Queries Prose Reading Reviews surrealism Talking About Poetry Tomas Salmun Tomaz Salamun translation visual yan jun ကိုချော ဘာသာပြန်
ဒီညနေလည်း ပန်းပင်တွေ ﻿ရေလောင်းတယ်
© 2020 zlkontempo. All Rights Reserved.